China mkpọ igwe na Jam mmepụta ngwá ụlọ ọrụ na-emepụta | JUMP
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri tinplate nwere ike iri nri na nri ụmụaka: piich mkpọ, mushrooms, mkpọ chili mkpọ, oroma mkpọ, apụl mkpọ, pears mkpọ, painia mkpọ, mkpọ agwa, mkpọ achara mkpọ, kukumba mkpọ, radish mkpọ, mkpọ tomato, mkpọ tomato, cherị mkpọ, apụl mkpọ, pears mkpọ, pinepepa mkpọ, agwa agwa, mkpọ achara mkpọ, kukumba mkpọ, mkpọ mkpọ, mkpọ tomato, mkpọ cherị wdg.
Mkpọ igwe na mmepụta akara nkwakọ: karama iko, ite PITA karama plastic, Mkpọ, aseptic mgbanwe nkwakọ, akpa akpa, 2L-220L aseptic akpa, katọn nkwakọ, plastic akpa, 70-4500g tin Mkpọ.
Jam mmepụta akụrụngwa bụ mkpụrụ mgbe tupu ọgwụgwọ, gbajiri na sie gel ihe (sugar na acidity regulator nwere ike kwukwara). Mkpokọta jams gụnyere ndị a: Ube tapawa, strawberry jam, bluuberi jam, apụl jam, oroma pee jam, kiwi jam, oroma jam jam, bayberry jam, cherry jam, karọt jam, tomato jam, aloe jam, mulberry jam, rose pear jam , hawthorn jam, painiapulu jam ube oyibo na na.
Usoro mmepụta Jam
Dị ka nhazi Njirimara nke dị iche iche mkpụrụ osisi na ikpeazụ ngwaahịa e ji mara nke ezi uche nhọrọ nke dị iche iche Filiks.
Ebufe, ndoli, igwe nhicha, igwe nhọrọ, na-akụpịa (n'otu oge ahụ peel, seeded, enucleated, stemmed), obụpde, degassing, igwe na-ejuputa, nwoke ịga ụlọ ọgwụ (mgbe nwoke ịga ụlọ ọgwụ), Igwe ịsa ahụ, igwe akara, ntinye, ntinye, nchekwa .
Nkwakọ ngwaahịa: karama karama, PITA plastic karama, zip-top nwere ike, aseptic soft ngwugwu, brik katọn, gable top katọn, 2L-220L aseptic bag na drum, katọn nkwakọ, plastic akpa, 70-4500g tin Mkpọ.
Nke gara aga: Igwe mmiri dị ọcha
Osote: Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ihicha na mbukota dum akara